MaGerman Vanoshandisa kupi Mari yavo? Mararamiro muGerman | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » Germany Portal » MaGerman Vanoshandisa kupi Mari yavo? Mararamiro muGerman
MuGermany, avhareji yemwedzi inogadzirwa yemakumi mana nemakumi mana nemana nemazana mana emaseji inopinda imba imwe neimwe. Kana mitero nemubhadharo zvabviswa, 4.474 ma euro anosara. Chikamu chikuru chemari iyi, 3.399 euros, inoshandiswa pane yakasarudzika. Inenge chikamu chimwe chete muzvitatu kusvika kune chimwe muzvina cheizvi - zvakasiyana munzvimbo yekugara - inobhadharwa.
Iperesenti yeYakazvimirira Yekushandisa Kuwedzeredzwa muGerman
Zvinovaka muviri (13,8%)
Nguva Yekuzorora Yekuongorora (10,3%)
Home Kugadzira (5,6%)
Zvinyorwa mumhuri dzeGerman
Washing Machine (96,4%)
Internet Kubatana (91,1%)
Kofi Machine (84,7%)
Special Cars (78,4%)
Kana isu tichienzanisa; MuGerman, vanhu vanoshandisa vanopfuura makumi matatu neshanu muzana wemari yavo pane rendi, nepo vaFrench vasingatomboshandisa makumi maviri muzana emari yavo. MaBritish, kune rumwe rutivi, vanoshandisa zvakaringana iwo huwandu hwemari yakaenzana pane hutano sevaGerman, apo vachishandisa mari yakawanda - inosvika gumi nemashanu muzana yemari yavo - mukuzorora uye mutsika. MaItari anofarira kutenga zvipfeko zvakanyanya. MaItari anoshandisa masere muzana pazvipfeko, zvakapetwa kaviri zveGerman.
KUFUNGA IZVI: Maitiro Ekuwana Basa muGerman Ini ndinowana sei basa kuGermany?